Wariye Kilwe oo muddo 22 maalina ku xiran Puntland | KEYDMEDIA ONLINE
Wariye Kilwe oo muddo 22 maalina ku xiran Puntland
Mid kamida wariyeyaasha ka howl gala magaalada Garoowe ee xarunta Puntland oo lagu magacaabo Kilwe ayaa muddo 22 cishe ah ku xiran xabshi sharci darro ah.
GAROWE, Soomaaliya - Wariyeyaasha ka howl gala Maamulka Puntland ayaa maanta isku soo bax ay ku doonayaan inuu caddaaladda helo Wariye Kilwe waxay ka sameeyeen magaalada bartamaheeda.
Weriye Kilwe Aadan Faarax ciidanka sirdoonka Puntland ee loo yaqaan PISA ayaa magaalada Garowe ku xiray weriyaha, habeennimadii Axaddii 27 -ka Disembar 2020 ayey ciidamado qabteen, xarigga Kilwe wuxuu dhacay maalin uun kaddib markii uu soo tebiyay mudaaharaad dadweynaha Garowe ay uga cabanayeen sicir bararka kaasoo ka dhacay gudaha magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland.
Wariye Kilwe waxaa lagu hayey xabsi qarsoodi ah iyadoo aysan arag qoyskiisa iyo qareenno, Isniintii oo ku beegan 11 -ka Janaayo 2021, ayaa Kilwe loo wareejiyay Xabsiga Dhexe ee Garowe. Waxaana isla maalinkaas ay Maxkamad Militeri ku soo oogtay eedeyn ah "isku day dil" iyadoo aanan wax caddeyn ah la keenin maxkamadda horteeda.
Warqadda qoraalka eedeynta ee kasoo baxday Maxkamadda Militeriga Puntland lama siin Kilwe iyo qoyskiisa midna, Haatan 22 maalmood kaddib Kilwe wuxuu ku jiraa xabsi xaq darro ah.
Inta badan saxaafadda ka shaqeysa Soomaaliya waxay u joogaan xarig sharci darro ah, dil iyo caga-jugleyn kuwaasoo ay u geystaan maamullada kala duwan ee midba mgaalo ootay ee ka jira Soomaaliya (Dowlag goboleedyada).
Puntland waxay kamid tahay magaalooyinka sida aadka ah ula dagaallama warbaahinta, waxayna baacsadaan wariyayaasha tabiya wararka ay u arkaan inuu ka hor imaanayo maamulkooda, mana u fiiriyaan warka inuu yahay war sax ah iyo in uu yahay war aan jirin.
Maamulka Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu la daalaa dhacayaa tan iyo bartamihii sanadkii ina dhaafay Sicir barar xooggan kaasoo sida la aaminsan yahay ay qeyb ka yihiin maamulka laftiisa, maadaama uu billaabay qaadashada lacagta shilin soomaaliga ee lagu canshuuro ganacsiga kasoo daga dekadda weyn ee Boosaaso, in badan ayey warbaahnta gudaha iyo midda bannaankaba ka hadleen dhacdada la xiriirta Sicir bararka, hayeeshee maamulka Puntland wuxuu u arkaa arrintaasi mid iyaga wax loogu dhibayo.
Wariye Kilwo ayaa u xiran warkii ku saabsanaa Sicir-bararka ee uu ka tabiyay magaalada Garowe ee xarunta Puntland, welina ma helin caddaalad, 24 saac ayuu sharcigu ogolyahay in lagu haayo xabsi ama saldhig, kaddibna in maxkamad ay xukunto ayuu intaas xabsi ugu jiraa wariyaha iyo qof kasta oo muwaadin ah ee lasoo eedeeyo.